Malaya Aziya kuyinto nhlonhlo, izungezwe ezilwandle ezine - i-Marmara, iMedithera, Black, Aegean, kanye ezimbili Straits abadumile - the Bosporus kanye iDardanelles, ohlukanisa eYurophu nase-Asia. It impela kude, uma kuqhathaniswa nezinye izindawo zase-Asia, kwaphoqa ubheke ngaseNtshonalanga, futhi ogwini lwayo kukhona Rhodes, eCyprus, nezinye iziqhingi.
Ubude Malaya Aziya kuziwa izinkulungwane amakhilomitha futhi ububanzi esiphezulu - kuya kweziyisithupha. insimu yalo - ezingaphezu kuka-500 eziyinkulungwane ayi skwele ikakhulu zintaba, main ingxenye yalo elalihlala Armenia Highland nase-Asia Minor, Umncele ezintabeni enyakatho Pontic, futhi eningizimu - the Taurus.
Kanye ngasogwini lwalo Malaya Aziya nhlonhlo embozwe izimila iMedithera. Amahlathi kuso hlala endaweni encane kuphela, okuyinto, ngaphezu kwemvelo, futhi is phetho nokubhujiswa kwabo eside.
Ezindaweni entshonalanga, inhlonhlo ye-of Malaya Aziya ziningi izintaba, perpendicular okuholela Aegean Sea, yingakho le ngxenye ugu eyinkimbinkimbi dissected futhi kuwukugcwaliseka amatheku ejulile nebanzi. Lapha (ngasentshonalanga) kuyinto echwebeni ebaluleke kakhulu-Turkish - Izmir.
Uma ubheka ibalazwe, inhlonhlo eme kuso izobukeka isikwele.
Endulo - kuya 4th ekhulwini BC - lalibizwa Anatolia.
Ngokuvamile, in the izinkathi ezahlukene emlandweni Malaya Aziya ngokwengxenye noma ngokuphelele ingxenye uthi ezifana umHeti, Lydian, Elikhulu Little Armenia, laseKhilikhiya, eRoma lasendulo, Amandla Omkhulu, wayiyisa eByzantium, kanye nabanye.
Nokho, abantu abanethonya elikhulu kakhulu ababehlala e-Asia Minor, babe amaHeti, nasempumalanga - Armenia, owayehlala lapha kuze kohlanga 1905.
Indima ebalulekile ezomnotho, ngakho-ke futhi ekuthuthukiseni impucuko Anatolia kudlalwa imithombo yemvelo yale nhlonhlo, futhi lapho isidingo sokuthuthukisa impucuko kancane kancane abe more and more. Ekujuleni Anatolia lasendulo ababecashe ezifakwa omkhulu ngezinto, kuhlanganise zethusi. Konke lokhu ingcebo futhi kwaholela enhlonhlweni abathengisi abavela emazweni ehlukene, kuhlanganise eMpumalanga Ephakathi.
Ngamtshela ukuthi uma izinto zethusi eluhlaza kanye nezinye izinto amazwe abathengisi abangewona ama-e-Anatolia, uboya bezimvu bungabathinti omangalisayo futhi indwangu yelineni yaseMesophothamiya kanye izindodla ithini ngakho kuzomele wenze ngethusi.
Ngo Anatolia athola imizi abadumile abaningi basendulo, kodwa mhlawumbe edume kakhulu lapho laliyinhloko-dolobha umbuso onamandla - Lydia - umuzi wasendulo wase-Asia Minor, phezu lomfula igolide eziveza Pactolus, eyaziwa ngokuthi indawo lapho baqala Mint okokuqala emlandweni wesintu, isiliva negolide zemali . LaseSardesi loke nje lidume ngokuthunga emlandweni njengendawo lapho wabusa adiozny nenkosi ecebile uCroesus.
Okungenani kwelinye idolobha abadumile lasendulo e-Asia Minor - Ankara. Waqale ezishiwo zemihla ngekhulu lesikhombisa BC Itholakala ngesikhathi kuhlangana khona imizila emikhulu yokuhweba amabili ahlanganisa Asia ne Europe.
Takhamuti telive letfu Malaya Aziya eyaziwa kahle kakhulu, futhi konke sibonga yokuthi kuba ku insimu yalo kukhona ezifana zokungcebeleka adumile njengoba Alanya, Antalya, Kemer, Belek, Side, nokunye, futhi eningizimu - Cyprus enhle.
Metro "Filevsky Park": idayagramu, isithombe, imiphumela
Yini imibhalo kudingeka ukuba Schengen visa?
Ekupheleni izwe; Peninsula Yamal
Kuyini orris impande? Lezi zilwane aziwa kakhulu ase-iris: incazelo ngezithombe
Imiqulu Lenten: ezinye izindlela ezithakazelisayo
Umlingisi u-Anton Pampushny: Biography, ukuphila siqu. amabhayisikobho amaningi uchungechunge TV nge iqhaza lakhe
Endleleni ukusonga napkins kuthebula
Ikhaya egazi. ukupheka zokupheka
Kwafika ama-generator imibuzo - ongakhetha